Iindaba - UkuSebenza kweTi yeziqhamo
Dibanisa udakada nesisu
Intyatyambo yaseJamani iqulethe isixa esikhulu sevithamini C, kwaye iziqhamo kunye neentyatyambo ezahlukeneyo zineempawu zazo. Phakathi kwazo, iidiliya zimnandi kunencasa, i-dao izolile kwindalo, isondla isibindi kunye nezintso, isondla i-qi kunye negazi, ikhuthaza ulwelo lomzimba, ikhuthaza ukuchama; Iipapaya kunye ne-citrus peels ziyetyisa ukutya kwaye zivuselele isisu, zonyuse ukutya; intyatyambo ye-rose inencasa ekrakra, ipholile kwindalo, isusa ubushushu kunye nokufuma, igxotha umoya, ikhuthaza ukujikeleza kwegazi, kwaye ityhefe; I-rose inencasa eswiti, ifudumele indalo, ikhuthaza i-qi kwaye isusa uxinzelelo, kwaye ikhuphe iintlungu ngegazi. Iziphumo ezahlukeneyo zahlukile, zonke ezo zinto zinxulumene nokulawula i-qi yethanga kunye nesisu.
Iti yeentyatyambo ingaphilisa ukubanda. Yeyona ivithamin C esebenzayo equlathe iti uqobo. Vitamin C inokuphucula ukhuseleko kwaye yomeleze amandla omzimba okumelana nezifo. Ukusela ikomityi yeti yeziqhamo kulingana nokusela ikomityi yejusi entsha. EJamani, abanye abantu bahlala besebenzisa incindi yeentyatyambo njengendlela yokuncedisa ukunyanga izifo ngeziyobisi, becinga ukuba zinokusinciphisa isifo.
Incindi yeentyatyambo yenziwa ngeziqhamo ezineentyatyambo neti, kwaye kuthiwa inembali yamakhulu eminyaka. Ngokubanzi abantu baseYurophu bayathanda ukusela ikofu, kodwa kumaJamani, intyatyambo kunye nencindi ziyinxalenye ebalulekileyo yokutya kwabo. Asingobantu abadala baseJamani kuphela abayithandayo ukusela, kodwa nabasetyhini baseJamani bayayithatha le teyi njengeyona nto ibalulekileyo kwimveliso yobuhle.
Zininzi iincasa ezifana neParis Champs, isithandwa esingalawulekiyo, iphupha elipheleleyo, i-hibiscus emanzini, isitayile saseYurophu, inenekazi elihle, ihlathi elimnyama, imvakalelo yehlobo, uthando lwe-blueberry, njl.
Intyatyambo kunye neti yeziqhamo ecocekileyo yahlulwe yaziincasa ezi-4: iParis Champs, iBlue Melancholy, uMthandi ongathintelwanga, iPurple House yeMicrosoft Medicine, zonke zinenzuzo yazo kwezonyango.
Iti ebizwa ngokuba yincindi yentyatyambo isekwe kwimbewu yeziqhamo kunye neentyatyambo kunye namagqabi amayeza amaTshayina njengezona zinto ziphambili, ezifanelekileyo iirhizomes kunye namanye amayeza amaTshayina. Yintsha kwaye yendalo, isempilweni, kwaye ayinabungozi kunye neziphumo ebezingalindelekanga.